သင့်ကလေး နှင့် ရင်ကြပ်ရောဂါ - ကျန်းမာသော အနာဂတ်ဆီသို့ ခြေလှမ်းများ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
သင့်ကလေး နှင့် ရင်ကြပ်ရောဂါ – ကျန်းမာသော အနာဂတ်ဆီသို့ ခြေလှမ်းများ
ဩဂုတ် 24, 2018 Suruthai Kurasirikul, M.D. Varatda Plainetr, M.D.
ရင်ကြပ်ရောဂါ သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကလေးသန်းပေါင်းများစွာတွင် ဖြစ်ပွားအကျိုးသက်ရောက်လျက်ရှိသည်။ရင်ကြပ်ရောဂါသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအားကျဉ်းမြောင်းစေပြီးအချွဲများပိုထုတ်သောကြောင့်အသက်ရှူရန်ခက်ခဲစေသည်။ပြင်းထန်မှုမရှိသောအခြေအနေတွင်ရင်ကြပ်ရောဂါမှာသာမာန်အဆင်မပြေမှုတစ်ခုသာဖြစ်နိုင်သည်။သင်၏ကလေးတွင်ရင်ကြပ်ရောဂါရှိလျှင်သော်လည်းကောင်းရောဂါလက္ခဏာပြလျှင်သော်လည်းကောင်းချက်ခြင်းလက်ဦးမှုရယူခြင်းဖြင့်ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝကို ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ရင်ကြပ်ရောဂါ ဆိုတာ ဘာလဲ။
ရင်ကြပ်ရောဂါသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုကျဉ်းမြောင်းပြီးယောင်လာစေကာထိုယောင်ရမ်း မှုကြောင် အချွဲများ ပိုမိုထုတ်စေသည်။ ထိုမှတဆင့်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ချွဲသံပါခြင်းနှင့်အသက်ရှုမြန်ခြင်း တို့ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရင်ကြပ်ရောဂါအားပျောက်ကင်းအောင်ကုသမှုမပေးန်ိုင်သော် လည်းရောဂါလက္ခဏာ များအားသက်သာစေရန်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ရင်ကြပ်ရောဂါသည်ဆိုးရွားသောအခြေအနေဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဆရာဝန်နှင့်သေချာစွာဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ရောဂါလက္ခဏာများအားစောင့်ကြည့်ကာရုတ်တရက် ဝေဒနာ ခံစားရခြင်း မှ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
အသက်ရှူရမောပန်းခြင်း၊ရင်ဘတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်နာခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့်ပိုမိုဆိုးလာတတ်သောချွဲသံပါခြင်း၊နှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်တတ် ပါသည်။ ဤ လက္ခဏာများ မကြာခဏဖြစ်လာပါက သင့်ကလေးရောဂါအခြေအနေ ဆိုးလာသည့်လက္ခဏာ ပင်ဖြစ်သည်။
ရင်ကြပ်ရောဂါဖြစ်စေသောအဓိကအကြောင်းအရင်းကိုအတိအကျမသိရသေးသော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ဓာတ်မတည့်ခြင်းများနှင့်မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းတို့မှာအဓိကဖြစ်စေသောလက္ခဏာများဖြစ်သည်ဟု လူသိများသည်။ ငုပ်နေသောလက္ခဏာများနှင့်လူနာများအားပိုမိုဆိုးသော ရင်ကြပ်ရောဂါဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
လေထု မှ ဓာတ်မတည့်သော အရာများ (ပန်းဝတ်မှုံ၊ ဖုန်၊ ဗောက်၊ အစရှိသည်ဖြင့်)
တုပ်ကွေးကဲ့သို့သော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း
ကိုယ်လက် အပြင်းအထန် လှုပ်ရှားခြင်း
စိတ်ဖိစီးမှု ကဲ့သို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွန်အမင်း တုံ့ပြန်မှုများ
အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေများ
အထက်က ပြောခဲ့သည့်အအတိုင်းရင်ကြပ်ရောဂါအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုသိရှိမှုနည်းသော်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ လူတို့သည် ရင်ကြပ်ရောဂါ ခံစားရန် ပိုမို ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုတော့ သိရှိထားပါသည်။
မိသားစုထဲတွငိ ရင်ကြပ်ရောဂါ ရှိသူများ
ဆေးလိပ်သောက်သောသူများ နှင့် ဆေးလိပ်ငွေ့တဆင့် ရှူရှိုက်မိလေ့ရှိသော သူများ
မိမိ၏ မိခင်မှာ မိမိအား ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင် ဆေးလိပ်သောက်သော သူများ
ကိုယ်အလေးချိန် များနေသော သူများ
ပုံမှန်အားဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု နှင့် ဓာတုများဖြင့် အလုပ်လုပ်နေရသောသူများ
မိမိ၏ ရင်သွေးမှာရင်ကြပ်ရောဂါဖြစ်နေသည်ဟုထင်ပါက (ကလေးအထူးကု)ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေး ပါ။ရင်ကြပ်ရောဂါဟုတ်မဟုတ်ေသေချာစေရန်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းများစွာရှိပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Spirometry – အဆုတ် လေပြွန် ကျဉ်းမြောင်းမှုကိုတိုင်းတာသောစစ် ဆေးချက်ဖြစ်သည်။ ဤစစ်ဆေးချက်တွင်အသက်ဝဝရှူပြီးနောက်လေမည်မျှရှုထုတ်နိုင်သည်ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါသည်။
Peak flow – ဤ စစ်ဆေးမှုတွင် အသက်ရှူထုတ်ခြင်း အားကို peak meter ဖြင့်တိုင်းတာပါသည်။တိုင်းတာမှုတွင်အားလျော့နည်းနေပါကအဆုတ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု နည်းပြီး အခြေအနေ ဆိုးလာသည်ကို ပြပါသည်။
Methacholine challenge – Methacholine သည် ရင်ကြပ်ခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေး သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအရာအားရှူသွင်းပြီးနောက်အသက် ရှူလမ်း
ကြောင်း ကျဉ်းမြောင်းလာခြင်းကိုပြသပါက ရင်ကြပ်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
အခြားစစ်ဆေးမှုများတွင်အဆုတ်နှင့်နှာခေါင်းပေါက်များကိုပုံရိပ်ဖမ်းပြီးစစ်ဆေးခြင်းသော်လည်းကောင်းအရေပြားနှင့်သွေးနမူနာဖြင့်ဓာတ်မတည့်မှုစစ်ဆေးခြင်း သော်လည်းကောင်း ပါဝင်ပါသည်။
လူတစ်ဦး နှင့် တစ်ဦးရောဂါအခြေအနေကွဲပြားသည်ကိုသိရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်၏ရင်သွေးမှာရင်ကြပ်ရောဂါလက္ခဏာပြခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်နိုင်သလိုနေ့စဉ်အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ဆရာဝန်မှ သင့်ရင်သွေး၏အခြေအနေ အားစမ်းသပ်ကာကုသရန်အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ရင်ကြပ်ရောဂါသည်ကို ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူစေပြီးသင့်ရင်သွေးကျန်းမာစေရန်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ဆရာဝန် မှ ရင်ကြပ်ရောဂါကို အောက်ပါအတိုင်း ကုသမှုပေးန်ုင်ပါသည်
Corticosteriods ရှူသွင်းခြင်း -ယောင်ရမ်းမှုကိုကျစေသောရှူသွင်းရသည့်ဆေး။ လိုအပ်သောရလာဒ်အတွက် ရက် သတ္တပတ်အနည်းငယ်ခန့်မှလပိုင်းအထိကြာနိုင်သော် လည်းရေရှည်သုံးရန်အတွက်အန္တရာယ် မဖြစ်နိုင်ပါ။
စပ်ပေါင်း ရှူဆေး – အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပွင့်ရန် beta agonists ပါဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းမှု အတွက် corticosteroids ပါဝင်ပါသည်။ ရေရှည်သုံးရန်ဖြစ်ပြီးဆိုးရွာသောရင်ကြပ်ခြင်း မှကာကွယ်ပေးသည်
ရောဂါလက္ခဏာများအားထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။အထက်ဖော်ပြပါအချက်များမှာရေရှည်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ရေတို နည်းလမ်းများတွင် ချက်ခြင်း သိသာသော beta agonists သို့မဟုတ် corticosteroids ထိုးဆေးနှင့်သောက်ဆေးပါဝင်ကာနှစ်မျိုးစလုံးမှာဆေးပြင်းသောကြောင့် အလွန်ဆိုးရွားသောအခြေအနေတွင်သာသုံးသင့်သည်။မိမိရင်သွေးအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါ။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်အတွက်လိုအပ်သောကုသမှုနည်းလမ်းများဖြင့်သင့်ရင်သွေးအားပျော်ရွှင်ကျန်းမာသော ဘဝကို ရယူပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်ကလေး နှင့် ရင်ကြပ်ရောဂါ - ကျန်းမာသော အနာဂတ်ဆီသို့ ခြေလှမ်းများ ရင်ကြပ်ရောဂါ သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကလေးသန်းပေါင်းများစွာတွင် ဖြစ်ပွားအကျိုးသက်ရောက်လျက်ရှိသည်။ရင်ကြပ်ရောဂါသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအားကျဉ်းမြောင်းစေပြီးအချွဲများပိုထုတ်သောကြောင့်အသက်ရှူရန်ခက်ခဲစေသည်။ပြင်းထန်မှုမရှိသောအခြေအနေတွင်ရင်ကြပ်ရောဂါမှာ
User rating: 2.75 out of5with 16 ratings
M.D., Faculty of Medicine, Prince of Songkla University. Faculty of Medicine Prince of Songkla University , 2002